Fifanolanana etsy Analakely :: Miha mihenjan-droa ny tady eo amin’ny mpivaro-kena sy legioma • AoRaha
Fifanolanana etsy Analakely Miha mihenjan-droa ny tady eo amin’ny mpivaro-kena sy legioma
Hatramin’ny omaly, tsy mbola nahita marimaritra iraisana ireo mpivarotra legioma sy ny fikambanan’ny mpivaron-kena noho ilay raharaha fananganana trano vy teo amin’ny faritra nisy an’iretsy voalohany teo aloha.
Noesorin’ireo mpivarotra legioma, tamin’ny alatsinainy alina lasa teo, ireo fefy natao tamin’ilay trano vy. “Nikasa ny hametraka ny fahazoan-dalana hanorina izy ireo fa nosakananay”, hoy ny iray tamin’ireo mpivarotra. Mbola nameno ny toerana nisy azy ireo hatramin’izay hatrany ny mpivarotra legioma, omaly, satria tsy mbola nisy ny toerana natokana hamindrana azy ireo.
“Toa efa misy ny toerana malalaka hametrahana azy ireo. Nandamina izany ireo delegen’ny tsena. Efa nametraka fitarainana eny amin’ny mpitandro filaminana kosa izahay mba tsy hamotehina intsony an’izay natsanganay”, hoy kosa Rakonandrianina Narcisse, filohan’ny fikambanan’ ny mpivaro-kena, izay manangana ny trano vy nahatonga ny olana. Milaza ny hanohitra ny fanamboarana hatramin’ ny farany kosa ireo mpivarotra legioma.
Fifanolanana etsy Analakely :: Miha mihenjan-droa ny tady eo amin’ny mpivaro-kena sy legioma - ewa.mg dit :
[…] Fifanolanana etsy Analakely :: Miha mihenjan-droa ny tady eo amin’ny mpivaro-kena sy legioma est apparu en premier sur […]
Tontolon’ny asa :: Tafatsangana ny vaomiera manokana hampihatra ny fiahiana ara-tsosialy